Donald Trump oo Maanta qaadanaya oo Go'aankiisa Qudus - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Donald Trump oo Maanta qaadanaya oo Go’aankiisa Qudus
Donald Trump oo Maanta qaadanaya oo Go’aankiisa Qudus
December 6, 2017 December 6, 2017 Cali Yare620
Iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu wado qorshe uu safaaradiisa Telaviv ugu rarayo Magaalada Barakaysan ee Qudus ayaa waxaa sii kordhaya qeylo dhaanta dunida Islaamku ay arrintaasi ka muujinayso.
War ka soo baxay Aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka ayaa lagu xaqiijiyay in madaxweyne Donald Trump uu ka hadli doono Arbacada maanta ah go’aankiisa ku aadan in safaarada Mareykanka ee Israil loo raro Qudus iyada oo ay soo wajaheyso dhaleeceyn caalami ah oo sii kordheyso.
Haweeneyda Afhayeenka ka ah Aqalka cad ee Mareykanaka ayaa warbaahinta u sheegtay in madaxweyne Trump Uu aad ugu adkaa fikirkiisa arrintaan ku saabsan.
Qaar kamid ah Tiro hoggaamiyeyaasha Dalalka Carabta ayaa madaxweynaha Mareykanka uga digay Donald Trump in uu ku dhaqaaqo go’aankaasi oo ay u arkayaan in uu yahay mid qaldan o aan Washington ka fiirsanaynin.
Amiirka Boqrtooyada Sucuudiga Boqor Salmaan ayaa u sheegay Trump in tallaaba noocaan ah o la qaado ka hor inta aan laga gaarin heshiis nabadeed oo kama dambeys ah arrintaan ay dhalin karto falcelin ka timaada muslimiinta.
Madaxweyne Trump ayaa markii uu kujiray ololihiisa doorashada waxaa uu balanqaaday arrimo ay kamid tahay talaabadan oo uu mareykanka u qaadayo aqoonsiga Israel ,balse waxaa muuqataa in ay ka dhalankarto caro ka timaada guud ahaan caalam
Baledweyne:Ciidanka Dowladda oo ku raad jooga Rag ka tirsan Al-shabaab
Sawirro: Madaxweynaha Galmudug oo dhiirogaliyey Ciyaartoyda Galmudug
Ciidamada dowladda oo dib ula wareegay Tiyeeglow
Shirka caalamiga ah ee madasha iskaashiga soomaaliya oo goordhaw ka furmay muqdisho
October 1, 2019 Duceysane
Axmed Madoobe oo ka baaqday Shirka Dhuusamareeb